Dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeneysa horumarinta dhaqaalaha Dalka – WARSOOR
Dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeneysa horumarinta dhaqaalaha Dalka
Muqdisho – (warsoor) – Ra’iisal Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ka hadlaayay sida lagu hormarin karo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sheegay inay la dagalamayaan leexsashada daqliyada kala duwan ee dalka laga soo saaro.
Waxa uu sidoo kale sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii loo hormarin lahaa wax soo saarka dalka iyo waxyaabaha kale oo ay Dowladda u dhoofiso Wadamada Caalamka.
Ra’isal Wasaare ku xigeenka ayaa tilmaamay in ay ku dadaalayaan sidii Soomaaliya ay kula tartami lahayd dalalka Caalamka dhanka dhaqaalaha iyo sidii loogu wada shaqeyn lahaa hormarinta dhaqaalaha.
Waxa uu xusay in Xukuumada Soomaaliya ay xooga saari doonto la socodka daqliyada ka soo xarooda Garoomada iyo dekedaha Dalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaallo kala duwan oo lagu xaqiijinaayo ka hortagga Musuq maasuqa iyo sidoo kale kordhinta daqliga Soomaliya.
Golaha Shacabka Soomaaliya oo soo gaba gabeynaya arinta Wasiirka Dastuurka